Al-Shabaab oo Maanta laga Saaray Deegaano ku yaala Jubada Hoose. – Hornafrik Media Network
Al-Shabaab oo Maanta laga Saaray Deegaano ku yaala Jubada Hoose.
By Liibaan Nuur	 On Sep 30, 2018
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaliyeed oo kaashanaya kuwa Darwiishta Jubbaland ayaa howlgal ay ka sameeyeen Gobolka Jubbada Hoose kula wareegay deegaano hoostaga degmada Jamaame oo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab.
Howl-galadan ayaa la sheegay in ay bilowdeen saaka aroortii hore kadib marii ciidamadu weerar qorsheysan ay ku qaadeen deegaanna ku teedsan degmada Jamaame, iyagoo gacanta ku dhigey dhammaan deegannada hoos yimada degmadaasi.
Suuq ku yaala Muqdisho oo xiran Maalinti labaad!
Muran ka dhashay xisbi uu sameeyay Madaxweynihii hore.